Xildhibaanada Aqalka Sare oo dib u dhigay ka hadalka Kiiska Qalbi Dhagax | Maalmahanews
Xildhibaanada Aqalka Sare oo dib u dhigay ka hadalka Kiiska Qalbi Dhagax
Xildhibaanada Aqalka Sare ee dalka ayaa dib u dhigay ka hadalka Kiiska C/kariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax, kadib markii shalay la iclaamiyay kulanka Xildhibaanada Aqalka Sare in maanta looga hadlaayo arintaasi.
Xildhibaanada qaar ayaa soo jeediyay in Ajandaha laga saaro kulanka, halka Xildhibaanada qaarna ay ku adkeysteen in aanan laga saarin Ajandaha kulanka, taasi oo dhalisay buuq ka dhex dhashay xarunta Aqalka Sare ee dalka.
Gudoonka Aqalka Sare ayaa markii dambe go’aamiyay in cod loo qaado arinta ku saabsan in Ajandaha Shirka lagu soo daro Kiiska Qalbi Dhagax iyo in laga saaro, maadaama Xildhibaanada Aqalka Sare ay ku buuqeen arintaasi.
Cod qaadis la sameeyay, ayaa waxaa suuragashay in Xildhibaano gaaraya 21 Xildhibaan ay u codeeyan in dib loo dhigo Ka hadalka arinta Qalbi Dhagax oo laga war sugo go’aanka Golaha Shacabka arintaan ay ka gaari doonaan.
11 Xildhibaan ayaa dhankooda u codeysay in Ajandaha kulanka aanan laga saarin Kiiska Qalbi Dhagax, inkastoo markii dambe codadka 21 ay bateen oo sidaasi dib loogu dhigay.
Xildhibaano ay ka mid yihiin Muuse Suudi Yalaxow Iyo Xildhibaan Axmed Xaashi ayaa soo jeediyay in arinta Qalbi Dhagax aanan dib loo dhigin oo laga doodo, inkastoo markii dambe Guddoonka uu shaaciyay in dib loo dhigay arintaasi.
Xukuumadda Ra’iisal Wasaare Khayre ayaa isku dayaysa qorshe kasta oo suuragal ka dhigi kara in dib loo dhigo doodaha Xildhibaanada ee ku aadan arrimaha Qalbi Dhagax, maadaama culeys hor leh Xukuumadda arintaan ay ku keenayso.
NEXTKoonfur Galbeed oo xaqiijisay inuu ba…